watchOS 7.4 Inowedzera Apple Tarisa ECG Basa kuAustralia neVietnam | Ndinobva mac
Manuel Alonso | 21/04/2021 17:00 | Apple Watch
Nezuro pakuratidzwa kwechiitiko chaApple chemuchirimo, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda, kambani yekuAmerican yakapa vhezheni yewatchOS 7.4 Regedza Mukwikwidzi uye yakasimbisa kuti iyo yekupedzisira vhezheni ichave yatove panopera svondo rino. Nesystem nyowani yekushandisa, mabasa matsva anowedzerwa, kunyanya kugona kuvhura iyo iPhone kuburikidza neFace ID kana uchishandisa mask. Asi iyo electrocardiogram basa rinowedzerwawo mumatunhu e Australia neVietnam.
Zvishoma nezvishoma mabasa eApple Watch Vari kupararira kumatunhu ese epasi. Kunyanya mabasa ane chekuita nehutano hwemushandisi. Imwe yemabasa aya, iyo Electro Cardiogram, yakatoratidzwa kuti yakakosha kuvanhu vazhinji. Vanhu vakaponesa hupenyu hwako nekuda kwekuti mamwe matambudziko akaonekwa nenguva. Ndokusaka zvinogara zvichikosheswa kuti izvi zvinoshanda zvinopararira pasi rese.
Iine watchOS 7.4 iyo electrocardiogram inoshanda uye nekudaro kudzivirira kwematambudziko emoyo kwasvika munyika dzeAustralia neVietnam. Izvi zvinouya rinopfuura mwedzi mushure mehurumende yeAustralia Therapeutic Products Administration yabvumidza chinhu ichi. Isu tatoziva kuti iyo ECG application inofanira kubvumidzwa nehurumende dzemunharaunda, sezvo iri basa rekurapa, kusiyana nekuyerwa kweoksijeni kweApple Watch nhepfenyuro 6 inova chiratidzo asi isingatariswe seECG.
Isu tatoziva kuti pamusoro pekusanganisa mabasa aya mumatunhu iwayo, iyo nyowani vhezheni yeiyo inoshanda system inouya nemamwe nhau dzinonakidza kwazvo:
Kugona kuvhura iyo iPhone uchishandisa Face ID chuku tinopfeka chifukidzo.
Sarudzo yekumisikidza rudzi rwechigadzirwa MAKARALI USB mune Zvirongwa zveyakakodzera kodhi yekuzivikanwa kweyekuzivisa kweaudio
Kugona kutepfenyura odhiyo uye vhidhiyo zvemukati kubva kuApple Fitness + Workout kune inoenderana materevhizheni uye zvishandiso AirPlay 2
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 7.4 inowedzera ECG mashandiro eApple Tarisa kuAustralia neVietnam